Momba anay - Fujian Shengyang Pipeline Technology Co., Ltd.
Fujian Shengyang Pipeline Technology Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2007. Any amin'ny Fuzhou Yuanhong Investment Zone any Fujian, akaikin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Fuzhou Changle no misy azy. 40 minitra monja miala ny Pingtan Comprehensive Experimental Reform Zone, ary misy toerana misy azy manokana. Ny orinasa dia manana renivohitra voasoratra anarana 10.88 tapitrisa yuan. Avy amin'ny orinasa mpamokatra entana madinidinika, nanjary orinasa nasionaly teknolojia avo lenta manokana amin'ny famokarana fantsom-plastika vaovao izy. Tamin'ny taona 2011, nanangana toby famokarana any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Faritra fampandrosoana ny toekarena any Guizhou ilay orinasa, ary nanangana Guizhou Shengyang Pipeline Technology Co., Ltd. Mandritra izany fotoana izany any Beijing, Shanghai, Guangzhou, Kunming, Changsha, Xi ' an, Chongqing, Jiangxi ary faritany lehibe sy tanàna lehibe hafa hananganana sampana sy birao, tambajotra fivarotana manerana ny firenena.
Taorian'ny firoboroboana sy fanavaozana tsy tapaka, vita ny andiam-pamokarana, manarona andiana fantsom-plastika vaovao toy ny famatsian-drano PE / PP / PVC, ny rano, ny entona, ny fitrandrahana, ny simika, ny kaomina ary ny herinaratra. Ny fantsom-by vita amin'ny fehikibo vita amin'ny vy dia misy famaritana feno, ary ny fahombiazan'ny vokatra dia samy manana ny tombony amin'ny vy sy ny plastika. Ny savaivony ambony indrindra amin'ny famokarana paompy famatsian-drano HDPE dia mety hahatratra Ф1200, ny savaivony farany ambony amin'ny ririnina sy ny rafitra maloto dia mahatratra ny savaivony anatiny Ф2400, ary feno ny fittings fantsona.
Shengyang Pipeline dia mandray ny fanavaozana ny teknolojia vokatra sy ny fampiharana ho fototry ny orinasa. Mifanaraka hatrany amin'ny haitao mandroso amin'ny fantsom-plastika vahiny, ary mandray ny fivoarana sy ny fampiharana fitaovana fananganana simika vaovao ho fitarihan'ny indostria. Mitroka teknolojia mandroso ary manatsara ny fifaninanana tsena an'ny orinasa iray manontolo. Ny orinasa dia nandalo ISO9001, ISO14001, mari-pahaizana OHS18001 ary mari-pahaizana momba ny tontolo iainana vokatra China. Tamin'ny taona 2018, nomena ny "Sinoa 500 Top" izy ary vondrona manome voninahitra sy azo itokisana ny faritany. Shengyang Lab dia nahazo fankatoavana avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Accreditation Nasionaly China momba ny fanombanana.
Hatramin'ny niorenany, Fujian Shengyang Pipeline Technology Co., Ltd. dia mifikitra amin'ny filozofia momba ny fananana kalitao ho fototra, ny mpanjifa no fotony, ny fanavaozana ho toy ny fanahy, ary ny tanjona hamorona lanja ho an'ny mpanjifa. Hatsarao hatrany ny haavon'ny fitantanana ny orinasa, miaraka amina teboka vaovao, hafainganam-pandeha avo lenta, serivisy tsara kokoa amin'ny endrika vaovao momba ny ala orinasa.